☆Hamba & Relax Retreat☆Usapho/Isibini kwi-5 TERRE
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAdriana
HAMBA & UPHUMLE I-Villa kwi-5 TERRE - SAN BERNARDINO DI VERNAZZA
☆ Kude kwingxolo yabakhenkethi kunye nesihlwele
☆Ukuhlala ngaphandle: iterrace elityeni
Ukupaka KWAMAHHALA kwisitrato sikawonke-wonke
☆ Ixhotyiswe ngokupheleleyo + ikhitshi egcweleyo
☆ Indawo ekhuseleke kakhulu
QAPHELA: indlu ifikeleleka kuphela ngokunyuka izinyuko ezingama-90.
☆ Imizuzu engama-25 uhamba phantsi kwizitepsi ukuya elunxwemeni lwaseVERNAZZA - 5 TERRE
☆Kuluhambo lwe-5 TERRE yokulandela umkhondo
☆ 30min kude le LA SPEZIA ngemoto.
IPANORAMIC PATIO IYANGQINA KUWE UKUBA UFUNA UKUBA AMAVA ASEKUHLALENI KAKHULU kude kubakhenkethi kunye nengxolo.
Nje ukuba ungene kwipropathi, uya kuhamba indlela ende, ufike ekungeneni kwendlu, kwicala lasekunene uya kufumana ipatio eneentyatyambo elityeni, enetafile kunye nezitulo.
-Ekungeneni uya kufumana indawo enkulu enegumbi lokutyela elinekhitshi, igumbi lokuhlala elineefestile ezijonge umbono wolwandle kunye nenduli;
- igumbi lokuhlambela elineshawa.
- igumbi lokulala eliphindwe kabini elinefestile enkulu;
- igumbi lokulala lesibini elineebhedi ezine ezingatshatanga kunye nomnyango omkhulu wefestile (umnyango wesibini we-villa);
- igumbi lokuhlambela lesibini kunye neshawa
I-Cinque Terre, iidolophu ezintlanu, luluhlu lweelali zokuloba ezintlanu ezithe ngcu phezulu kwi-Italian Riviera kwingingqi yeLiguria, ethe yadityaniswa mva nje ngomzila weemeyile kwaye ifikeleleka kuphela ngololiwe okanye ngamanzi.
Inkqubo yamandulo yeendlela zeenyawo iseyeyona ndlela ilungileyo yokutyelela iidolophana ezintlanu: cofa apha eMonterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola kunye neRiomaggiore.
I-Cinque Terre iphawulwe ngobuhle bayo. Kangangeenkulungwane, abantu baye benza amasimi ngocoselelo ukuze kulinywe iidiliya neminquma kwimixawuka nemixawuka ukuya kutsho kumawa ajonge uLwandle lweMeditera.
Iimbono ezichukumisayo zamazibuko asezantsi kakhulu kunxweme lwasendle kodwa olunobubele kunye neenqaba zamaxesha aphakathi kunye nemidiliya emininzi kunye nemibala eqaqambileyo yenza le holide ibe yiholide ekhumbulekayo.
I-Cinque Terre, evunyiweyo kwi-1997 yi-Unesco yeLifa leMveli yoMntu, namhlanje yiPaki yeSizwe kunye neNdawo yaseLwandle eKhuselweyo ngenjongo yokukhusela eli lifa lenkcubeko enkulu kunye nokusingqongileyo kwendalo.
Idolophana encinci yokuloba iVernazza mhlawumbi yeyona nto ibonakalisa iCinque Terre kwaye ihlelwa njengenye yeedolophana ezintle e-Italy.
IVernazza yasekwa malunga ne-1000 A.D. kwaye yayilawulwa yiRiphabhlikhi yaseGenoa ukuqala ngo-1276. Inqaba yamaxesha aphakathi, iBelforte, yakhiwa phakathi kwiminyaka yoo-1500, ngokukodwa ukukhusela ilali kubaphangi.
Eyona ndlela ifanelekileyo yokufika kule lali inomtsalane kukuhamba ngolwandle. Izibuko elincinane lijikelezwe ziipastels ezimibalabala ezifihlakeleyo kwaye i piazza enomtsalane ineendawo zokutyela ezilungileyo kunye nemivalo.
Le lali ingqongwe ziimithi zomnquma ezithe rhwelele ekucingelwa ukuba zivelisa eyona oli yomnquma ibalaseleyo kweli lizwe.
Kukho ezinye iindwendwe zothando ngokwenene kunye namagumbi amnandi embindini welali enombono omangalisayo ngaphezulu kwesikwere esikhulu kunye nezibuko elincinci elinemibala. Sikudwelise ezona ndlela zingcono kuwe: Iindlu zeendwendwe eVernazza.
Ukuba ujonge ihotele kwindawo yaseCinque Terre nceda ujonge: Iihotele eCinque Terre
Inombolo yomthetho: 011030-LT-0207
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Bernardino